नेपाली विद्यार्थी नेपाली विषयमै सबैभन्दा कमजोर ! - Everest Dainik - News from Nepal
नेपाली विद्यार्थी नेपाली विषयमै सबैभन्दा कमजोर !
काठमाडौं, कार्तिक २५ । नेपाली विद्यार्थी नेपाली विषयमै कमजोर देखिएको छ । निजी तथा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमाथि गरिएको एक अनुसन्धानले उनीहरू नेपाली विषयमा औसतभन्दा कमजोर देखिएका हुन् ।
शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (ईआरओ) ले यो वर्ष गरेको अध्ययनअनुसार नेपाली विषयमा अधिकांश प्रदेशका विद्यार्थीले औसत अंक पनि प्राप्त गरेनन् । चारवटा प्रदेशका विद्यार्थी औसतभन्दा कमजोर देखिएका छन् भने तीनवटा प्रदेशले औसत अंक बल्लतल्ल कटाएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस यो वर्षदेखि कक्षा ११ र १२ मा चार विषय अनिवार्य
अध्ययनअनुसार गणितभन्दा पनि नेपालीमा विद्याथी कमजोर छन् । गणितमा तीनवटा प्रदेशले औसत अंक ल्याउन सकेकोमा नेपालीमा चारवटा प्रदेश असफल भएका छन् । विज्ञानमा भने पाँचवटा प्रदेशले औसत अंक ल्याउन सकेका छैनन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
ट्याग्स: Nepali subject, student